Oge a na-ewe na Ahụmịhe Onye Nwee Nweta Ọrịre Kachasị elu | Martech Zone
Nkwado nke Onye Ọrụ Ahụmahụ Nyocha, e duziri ya na Kedu ihe na-eme - nyocha iji ojiji ntanetị na saịtị nyocha onye ọrụ - kpughere nnọọ ọnụ ọgụgụ.
74% nke azụmaahịa kwenyere na ahụmịhe onye ọrụ bụ isi maka ịkwalite ahịa, mgbanwe na iguzosi ike n'ihe.
Gịnị bụ Ahụmahụ Onye Ọrụ?
Dabere na Wikipedia: Ahụmịhe onye ọrụ (UX) gụnyere mmetụta nke mmadụ banyere iji otu ngwaahịa, usoro ma ọ bụ ọrụ. Ahụmịhe onye ọrụ gosipụtara akụkụ ahụmịhe, mmetụta, nke bara uru na nke bara uru nke mmekọrịta mmadụ na kọmputa na njide ngwaahịa.
Agbanyeghị na anaghị m ekwenye na nkọwa a, azụmaahịa ga-ele anya na ahụmịhe onye ọrụ adịghị obere. Ọ bụghị niile banyere onye ọrụ, ọ bụ maka ịhakọ mkpa ha na ebumnuche gị ma nye ozi, imewe na igodo iji gbochie ọdịiche ahụ.
Usoro dị mkpa iji soro na saịtị gị maka Ahụmịhe Onye Ọrụ:
Ọnụ ọgụgụ ntụgharị - Gini bu pesent nke ndi mmadu biara na saiti gi ma buru onye ndu ma obu ire ere? Implemented mejuputara ebumnuche na nchịkọta gị ọnụego iji chọpụta ma ọ na-arị elu?
Ọnụ Ụgwọ - Ole ndị ọbịa bịara na saịtị gị wee pụọ ozugbo? Nke a bụ ihe na-egosi na saịtị nwere ike ọ gaghị nke kachasị maka ọchụchọ na mmekọrịta… yabụ ndị ọbịa na-abịa atụmanya nke ozi ha ga-ahụ ebe ahụ mana ha anaghị eme. Ọ bụrụ na isiokwu ndị na-akwọ ha dị mkpa, mgbe ahụ ị nwere nsogbu ọzọ information ozi ị na-enye anaghị arụ ọrụ ma ị naghị etinye ha n'ime ụzọ ntụgharị.
Oge na saịtị - Dịka, onye na-etinyekwu oge na saịtị gị ga-etinye aka na miri emi, ihe na-egosi na ha bụ ezigbo ndu nke enwere ike ịgbanwe (ọnụọgụ gị nwere ike ịdị iche!). Kedu ihe ị na-eme iji mee ka ndị ọbịa bawanye? You nwere vidiyo? Whitearies? Ileba Studies? A blog? Inye ozi di iche-iche nke na-akpali ntinye aka bu isi.
Ọ ga-agwaghị na-ekwupụta na Ahụmịhe Onye ọrụ dabere kpamkpam na nhazi nke saịtị gị, ijikọ ụdị gị niile, yana ịnye ndị na-ajụ ase na ozi ndị ọbịa gị chọrọ.
Mgbe ụfọdụ, ahụmịhe onye ọrụ na-adịghị mma nwere ike ịbụ ihe dị ka obere ịchọta nọmba ekwentị ịkpọtụrụ azụmahịa gị. O nwere ike ịbụ iji mkpụrụedemede na ebe ọcha na-eme ka o sie ike ịgụ. Ọ nwere ike ịbụ njirimara na njirimara ọkachamara nke saịtị gị yana ma ọ na-enye ya onye ọrụ n'ogo ntụkwasị obi na ọkachamara. Na, ọtụtụ mgbe, ọ nwere ike ịbụ mgbagwoju anya ahịa-na-ekwu okwu na-eme ka o siere ndị ọbịa gị ike ịghọta ma ngwọta gị nwere ike ịbụ ihe ngwọta maka nsogbu ha.
Eledala mmetụta nke onye ọrụ gị anya. Ọ bụrụ n’inwe obi abụọ, gaa lee ya ule. Y’oburu na inwere ego ime ya, jidere nwa gi ma o bu nwunye gi ma nweta mmeghachi omume ha. O nwere ike iju gị anya.
Tags: ụba ọnụegoebumnuche azụmahịantụgharị ntụgharịihe omumaederedeGoogle Analyticsgoogle nchịkọta ihe mgbaru ọsọọmụmaNkwado ire ahịaoge na saịtịahụmahụ onye ọrụonye ọrụ chọrọọcha